कस्तो अचम्म ! एउटै मान्छे केटा केटी दुवै बन्ने, टिकटकमा भाइरल आदित्य मिडियामा (भिडियो हेर्नु’होस)
Homeसमाचारकस्तो अचम्म ! एउटै मान्छे केटा केटी दुवै बन्ने, टिकटकमा भाइरल आदित्य मिडियामा (भिडियो हेर्नु’होस)
March 6, 2021 admin समाचार 3629
यतिबेला टिक’टक यस्तो ठाउँ बनेको छ, जहाँबाट आफ्नो प्र’तिभाहरु देखाउन युवा जमा’तलाई निकै सजिलो भएको छ । आफ्नो कला देखाएर फ्यान कमाउने मात्रै हैन, चर्चामा आई नाम र दाम क’माउने समेत भैसक्यो, टिक’टक स्थल ।
यतिबेला धेरै नेपाली युवती मो’डलहरु टिकटकबाटै प्रवेश गरी साँगीतिक क्षेत्र’मा निकै व्यस्त छन् र धेरै कलाकारहरु ब’निसकेका छन् । यसैबिच टिकटकमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै भिडियो बनाएर पर्साका आदित्य लामा चर्चामा छन् । आदित्य टिक’टकमा आधा केटा र आधा केटीको रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
उनी आ’फ्नो मुखमा आधा आधा मेकअप गरेर केटा केटी बन्छन् । ९ महिनाअघि उनले टिक’टक खोलेका हुन् र हालसम्म उनको एक लाख असी हजार भन्दा माथि फलोअर्स भैसकेका छन् । यसैबिच शिशिर भण्डारीसँगको कुराका’नीमा आदित्यले आफ्नो वास्तवि’कता खोले । – इताजा खबरबाट
आमा पाल्नलाई दाजुभाइको मुद्धा, फैसला सुनाउने न्यायाधीश नै धुरु’धुरु रोए…
आज २४ घण्टामा कोरोनाबाट २२५ जनाको मृ’त्यु
May 11, 2021 admin समाचार 2954
पछिल्लो २४ घण्टामा को’रोनाभाइरसबाट २२५ जनाले ज्या”न गु’माएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार सार्व’जनिक गरेको तथ्यांकमा २२५ जनाको मृ’त्यु भएको उल्लेख गरिएको हो । यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्या’न गुमा’उनेको कुल संख्या ४ हजार
April 4, 2021 admin समाचार 3370
April 22, 2021 admin समाचार 2480
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215810)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207597)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (207252)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (206123)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204936)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (204141)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (202404)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (202263)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194162)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (171345)